Njem - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Ihe ị ga-ahụ na Castellon de la Plana
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị ga-ahụ na Castellón de la Plana, anyị ga-agwa gị na ihe nketa ya dị ukwuu buru ibu ma mara mma. Amaja izute ya.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Haro? Obodo Rioja na-enye gị ihe ncheta, nri dị ụtọ na ọmarịcha ala. Amaja izute ya.
Ebee ka ị nwere ike dọba ụgbọala
Iji mara ebe ị nwere ike ịdọba ụgbọ ala, ị ga-amata ọdịiche ahụ na nke ịma ụlọikwuu. Anyị na-akọwara gị ya n'ụzọ zuru ezu.
Kedu ihe m kwesịrị iji gaa London
Kedu ihe m kwesịrị iji gaa London: paspọtụ na akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa iji gaa na obodo ahụ. Amaja izute ya.
Ihe ị ga-ahụ na Aranjuez
Aranjuez bụ nnukwu njem nlegharị anya ma ọ bụrụ na ị na-eche ịga Spain. N'ebe dị nso na Madrid, dị naanị kilomita 47, ị ga-amata akụ ya. Chọpụta akụ ụlọ na omenala nke Aranjuez nwere, nke dị nso na Madrid.
Katidral kasị ukwuu n'ụwa
Katidral kasị ukwuu n'ụwa bụ Seville, n'agbanyeghị na St. Peter's Basilica dị na Rom ka ibu. Mara ihe ncheta abụọ a.
A maara Seville maka oge okpomọkụ ya na akụ omenala ya, na-eme ka ọ bụrụ ebe a na-atụ aro ka ị gaa na Spain. Ma eleghị anya, ọ bụghị na Seville, e nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme ma hụ ka ọ bụ obodo nke narị afọ gara aga: mkpọmkpọ ebe ndị Rom, ụlọ ndị Arab, ụlọ ụka mgbe ochie, ịlụ ọgụ na flamenco.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Elche? Chọpụta ihe ncheta na ọdịnala nke ọmarịcha obodo Levantine dị ka Basilica nke Santa María, Alcázar na ihe omimi.
Ụlọ elu kacha elu n'ụwa
A na-ahụ ụlọ elu kachasị elu n'ụwa na Asia. Nke mbụ sitere na West bụ ebe asatọ. Obi siri ike ịchọpụta ha.
Obodo dị n'ụsọ oké osimiri dị ọnụ ala ibi
Ọ bụrụ na ị na-achọ obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri dị ọnụ ala ibi na Spain, anyị ga-agwa gị na e nwere ụfọdụ ndị mara mma. Chọpụta ha wee họrọ otu n'ime ha.
Central America abụrụla nnukwu njem nlegharị anya maka ndị niile na-achọ ịhụ ọdịdị okike, oke osimiri na osimiri kacha mma. N'ime mara mgbe ị ga-aga Costa Rica iji zere oke mmiri ozuzo ma ọ bụ ìgwè ndị njem nlegharị anya na-enweghị atụfu ihe ọ bụla mara mma.
Mpaghara kacha dị ize ndụ n'ụwa
Ụwa bụ ebe na-ezighị ezi, ndị ogbenye na-abawanye ụba nakwa na ịda ogbenye na-eweta mpụ. Taa ndụ n'obodo ukwu aghọwo Obodo niile dị n'ụwa nwere agbata obi dị ize ndụ ebe ọ na-adịghị mma ịga, ma ehihie ma ọ bụ abalị. Lee ụfọdụ n'ime ha.
Obodo kacha nta na Spain
Obodo kacha nta na Spain bụ site n'aha akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị ndị bi na ya. Nke a bụ ikpe Frías ma ọ bụ Redes. Amaja izute ha.
Obodo kacha mma na Burgos
Obodo kacha mma na Burgos: Anyị na-atụ aro ka esi Lerma gaa Orbaneja del Castillo na-agafe Frías. Amaja ime ya.
Playa d'Aro: ihe ị ga-ahụ. Obodo Girona na-enye gị ọmarịcha osimiri nke Costa Brava na ọtụtụ ihe ncheta. Nwee obi ụtọ izute ya
N'ime ndụmọdụ maka njem na Costa Rica, anyị na-akọwa usoro ịdị ọcha, ma ọ bụ akwụkwọ. Mana, karịa ihe niile, gaa n'ihu gaa na obodo ahụ
N'ebe ugwu Alicante bụ obodo Jávea, ebe mara mma nke dị n'ụsọ oké osimiri nke na-ekpori ndụ dị mma n'afọ niile, nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nke ndị maara ebe kachasị mma nke Jávea, na Alicante na-ahọrọ nke ọma. Ha bụ ọmarịcha osimiri iji nọrọ ezigbo ezumike.
Obodo mara mma nke Malaga
N'ime obodo mara mma nke Malaga bụ Ronda, Frigiliana, Antequera ma ọ bụ Archidona. Na-anwa anwa ileta ha ma nwee ọmarịcha ịma mma ha
Obodo kacha mma na Granada na-enye gị ohere ịnụ ụtọ oke osimiri na ugwu, nke nwere oke osimiri na mbara ala dị egwu. Amaja izute ha
Akụkọ ihe mere eme nke Blue Mosque na Istanbul
Otu n'ime kaadị akwụkwọ ozi kacha ochie nke Turkey bụ ụlọ alakụba Blue a ma ama nke na-emegide mbara igwe Istanbul. Na-adọrọ adọrọ, mara mma, na-agbagọ, chọpụta ọmarịcha ụlọ alakụba Blue, otu n'ime nnukwu akụ nke Istanbul, Ihe Nketa Ụwa na ndọta nlegharị anya.
Ihe ị ga-ahụ na Jaén. Obodo Andalusian nwere ọmarịcha ọmarịcha nnukwu ụlọ, gburugburu okike dị ka nrọ na ezigbo gastronomy
Otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya na Mexico bụ Riviera Maya. Ọ bụrụ na ị na-amasị anyanwụ, oké osimiri na osimiri, nke a bụ otu n'ime ndị kasị achọ ebe na Riviera Maya: ebe ịnọ, ihe na-eme, mgbe njem ... Ihe niile na-enwe a ezigbo Caribbean ezumike!
Lanzarote: ihe ị ga-ahụ
Lanzarote bụ agwaetiti nke Canary Islands, na kemgbe 1993, ihe niile bụ Biosphere Reserve. Cheedị echiche mgbe ahụ ịma mma ya! Ọ bụ nke anọ kacha agwaetiti Chọpụta ihe ebube nke agwaetiti Lanzarote: osimiri, ọgba, nka, mmanya, sọfụ ...
Ị nwere ike ịmata obodo n'otu ụbọchị? N'ezie ọ bụghị, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ị pụghị ịmata ya nke ọma na otú obodo ahụ si kwesị ... ma e nwere oge mgbe ị na-emeghị, ọ bụrụ na ị nwere naanị otu ụbọchị ịmara Madrid mgbe ahụ ị ga-etinye uche gị dum. na ihe nkiri ya kacha ewu ewu.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Soria na gburugburu? Obodo Castilian nwere nnukwu ihe nketa na ọdịdị nwere oke. Amaja ịma ya.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Icod de los Vinos? Obodo Tenerife nwere ọtụtụ ihe ncheta na ọdịdị nwere oke. Amaja izute ya
Berlin bụ isi obodo Germany na otu n'ime obodo ndị njem nlegharị anya mgbe ị na-eleta Europe. Ihe karịrị afọ 70 agafeela kemgbe njedebe nke abụọ Ọ bụrụ na ị gaa Berlin ị ga-amata obodo ndị mara mma na ebe ndị dị gburugburu: obodo ochie, ndagwurugwu mara mma, ọwa mmiri ...
Ihe ị ga-ahụ na Navaluenga. Obodo Avila na-enye gị ọmarịcha gburugburu ebe obibi, ihe ncheta na ọtụtụ ihe omume. Amaja ịma ya.
Njem zuru oke na Japan enweghị ike iche n'amaghị Okinawa. Ọ bụ otu n'ime ógbè ndị mejupụtara obodo ahụ mana ọ dị ihe dị ka awa atọ ma ọ bụ karịa na Okinawa ọ bụ ọnụ ụzọ na-aga ebe okpomọkụ Japan.
Ọnụ ụzọ nke Menorca
Coves nke Menorca na-enye gị ọmarịcha aja ọcha na mmiri anụnụ anụnụ turquoise doro anya. Amaja ịma ha. Ha agaghị ekwe ka ị daa mbà
Cuenca bụ obodo Spanish mara mma, nke nwere akụkọ ihe mere eme nke narị afọ iri, n'agbanyeghị na njem nlegharị anya ya na ihe nkiri akụkọ ihe mere eme na-amalite site na ọrụ Cuenca bụ obodo Spanish ochie nke etiti akụkọ ihe mere eme bụ Ebe Ihe Nketa Ụwa. Ụlọ eze, ụlọ ụka, ogige, nnukwu ụlọ, mgbidi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ọ dị gị n'aka iji ụgbọ ala mee njem? Ị na-anụ ụtọ njem ahụ n'onwe gị, na-akwụsị n'ebe dị mma, ịbụ ụdị nduru ma ọ bụ eju? Ịga njem n'ụgbọala nwere ike ịbụ ihe egwuregwu nke ndụ gị ma ọ bụ ezigbo nro, ya mere ṅaa ntị na ndụmọdụ ndị a.
Ihe a ga-eme na Isla de Lobos bụ ajụjụ dị mfe ịza. Ọ bụ gburugburu ebe obibi nwere ihe ùgwù. Amaja ịmara ya
Kiev bụ isi obodo Ukraine, ma ọ bụkwa obi obodo, obodo oge ochie, nke nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme na ọgaranya omenala. Nke a bụ ama Kiev ọgba ebe obibi ndị mọnk bụ ịtụnanya: catacombs, tunnels, ụka, chapels, ngosi ihe mgbe ochie, ọtụtụ akụ!
Kedu ihe ị ga-eme na Sagunto? Anyị na-achọpụta obodo Levantine akụkọ ihe mere eme nwere ihe ncheta na gburugburu ebe obibi ya. Gaa n'ihu gaa leta ya.
N'ọtụtụ ihe nkiri na United States, anyị na-ahụ ọzara nwere ndị na-egbu egbu, ndị na-agba ehi, ndị na-ere ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ndị na-eme njem. Ọzara nke Zute nnukwu ọzara anọ nke United States, cacti, coyotes, aja, ọhịa, oke okpomọkụ na ọbụna snow.
Ihe ị ga -ahụ na Jaipur
India bụ nnukwu mba na otu steeti mebere ya bụ Rajasthan, onye isi obodo ya bụ obodo mara mma ma mara mma nke Jaipur. Anyị ga -ekwu maka ya taa Jaipur bụ otu n'ime obodo mara mma na njem nlegharị anya na India: obí eze, ụlọ arụsị, ụlọ elu, ubi na ebe ngosi ihe mgbe ochie, ihe niile na -echere gị.
Isi obodo Mexico bụ obodo ochie, mara mma, juputara na ndụ, ihe ọchị, akụkọ ihe mere eme, obodo na -atọ ụtọ. Enweghị nkọwa ọ bụla maka obodo kachasị mkpa na ebe ngosi nka, ogige, ụlọ, ọwa mmiri, nka, akụkọ ihe mere eme, pyramid ... ihe a niile na ọtụtụ ihe ị nwere ike ịma na Mexico City.
Nepal bụ obere mba na -enweghị mmiri na Eshia, na mpaghara India. Ọ dị na Himalaya na ndị agbata obi ya bụ China, India na Bhutan. Na Nepal ị nwere ike ịga leta ebe amụrụ Buddha, Everest, ụlọ arụsị, arụsị na ịkwụ ụgwọ yana nwee anụrị mara mma.
Obodo kacha mara mma na Huelva
Obodo kacha mara mma na Huelva na -agwakọta ọmarịcha ala na nnukwu ihe nketa. Anwa anwa mara ha ugbu a.
Ụlọ nsọ nke Egypt
Ọ bụrụ na -amasị gị n'akụkọ ihe mere eme, mmepeanya oge ochie na ihe omimi, Egypt ga -anọrịrị n'ụzọ njem gị. N'otu oge na ndụ gị, ị ga -aga Discover nke bụ ụlọ nsọ Egypt nke ị na -agaghị agbaghara ma ọ bụrụ na ị gaa obodo ochie a dị omimi.
Ibiza dị na Mediterenian na ọ bụ akụkụ nke agwaetiti Balearic, o nwere kilomita 210 nke oke osimiri na ụfọdụ ọmarịcha osimiri mara mma na Mgbe ọrịa a dị n'azụ anyị, kedu maka itinye ụbọchị ole na ole n'ụsọ osimiri kacha mma na Ibiza?
Akụkụ osimiri kachasị mma na Granada bụ akụkụ a na-akpọ Costa Tropical. Gụọ akụkọ anyị wee gaa n'ihu leta ha. Ị gaghị akwa ụta
Banye wee chọpụta ọzara mara mma n'Africa: site na Sahara ruo nso Kilimanjaro.
Gịnị kpatara o ji dị mkpa ịnwe mkpuchi mkpuchi ụlọ?
Ọ bụrụ na ị na -eji ụgbọ ala eme njem, ọ dị mkpa ịnwe ezigbo mkpuchi iji kpuchie ihe ọ bụla na -atụghị anya ya. Kedu ihe ị kwesịrị ị paya ntị ka ị nọrọ jụụ?
Otu esi eyi uwe na Dubai
United Arab Emirates bụ otu ndị isi ala na n'etiti ha bụ Dubai. Ruo oge ụfọdụ ugbu a ọ bụrụla ihe ama ama maka ya Ị ma ka esi eyi uwe na Dubai? Uwe mkpụmkpụ, obere uwe mwụda na bikini ma ọ bụ ogologo uwe mwụda, uwe aka ogologo na mkpuchi isi?
Obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa dị na Eshia, Oceania, Europe, na North America. Tokyo na Singapore pụtara n'etiti ha
Ugwu Everest bu ugwu kacha elu n’uwa, ma obughi ya nani ya. Mara nke bu ugwu itoolu kachasi elu n ’uwa.
Otu n'ime ebe kachasị mma ọdụ ụgbọ mmiri na Central America bụ Punta Cana, ebe dị na Dominican Republic ebe ọtụtụ ihe ndị mara mma bụ na ị na-eme atụmatụ ezumike gị? Anyị na-agwa gị nke bụ ụlọ oriri na ọ bestụ bestụ kacha mma na Punta Cana: naanị ndị okenye, ezinụlọ, ha niile ...
Ebe iga njem na Mee: uzo kachasi nma nke 10 nke gunyere gburugburu ebe obibi di egwu, ihe ncheta puru iche na emume ndi ozo.
Badalona pụtara ọtụtụ ihe ya site n'oge Rom. Ma maka osimiri ya dị ebube na ogige ntụrụndụ ya mara mma.
Isi iyi nke Osimiri Mundo, n'etiti Alcaraz Sierra nke Albacete, bụ ihe okike sitere n'oké ịma mma nke ga-atọ gị ụtọ.
Cala Macarella bụ otu n’ime oke osimiri kachasị mma na Menorca n’ihi aja ọcha ya, mmiri ya na-acha anụnụ anụnụ na gburugburu ya.
Anyị na-agwa gị ndị bụ ndị kacha mma nudist osimiri na Almería, a set nke aja ebe ị kwesịrị ị na-eleta.
Ejiri El Cañuelo osimiri mara mma site na gburugburu ebe obibi mara mma ma dị nso na obodo Malaga mara mma nke Nerja.
Cerro del Hierro bụ ọmarịcha mara mma nke dị na mpaghara Seville, na nso obodo Costantina na San Nicolás.
E nwere ọtụtụ obodo ndị gbahapụrụ agbahapụ n’ụwa ndị bụbu obodo na-enwe ihe ịga nke ọma. Anyị na-agwa ha ihe ị ga-eme.
A ije site na Latin Quarter, na Paris
Otu n'ime akụkụ kachasị mma na Paris bụ Quarter Latin, na aka ekpe nke Seine, na…
N'ihe siri ike na nhazi ya, Panama Canal bụ ọrụ nke nkà ihe omimi nke na-ejikọ oké osimiri ...
Masai Mara, njem njem safari
Masai Mara bụ nnukwu ebe njem safari ma na-adọta ndị njem si n'akụkụ ụwa niile. Maka ndị ihe na-atọ ha ụtọ ...
Porto na ọmarịcha osimiri ya
Osimiri Portugal bụ otu n’ime ebe kachasị ekwo ekwo na Europe. Oke osimiri Atlantic juputara ...
Anyanwụ kacha mma na Caribbean
Ọ dịghị mfe iru a otutu mmadu kwenyere mgbe ị na-ekpebi ndị bụ ndị kasị mma anyanwụ na Caribbean….
Obodo ndị mmadụ kacha biri n’ụwa
Dabere na atụmatụ UN kachasị ọhụrụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri mmadụ 7.700 bi na mbara ala. N'ime ha, nde 450 ...
Agwaetiti Marquesas, paradaịs
Ugwu, ahịhịa ndụ juru ahịhịa ndụ, oke osimiri na-acha anụnụ anụnụ, ụsọ osimiri na anwụ, nchịkọta dị mma nke ihe Marquesas Islands bụ….
Nabata na samoa
Ọ bụrụ na m chee etu ndụ paradaịs ga-esi dịrị, amaghị m ihe kpatara ya, mana m na-echekarị agwaetiti ...
Sudan bụ mba Africa nke nwere ọdịdị mara mma. Ọ bụghị njem nleta ebe ọ bụla, ọ bụ maka ndị njem ...
Masada, njem n'ime akụkọ ihe mere eme
Mgbe m bụ nwatakịrị, e nwere usoro TV a ma ama nke a na-akpọ Masada, ihe nkiri akụkọ ihe mere eme na kpakpando sitere na ...
Goa, paradaịs na India
Goa bụ otu n'ime ebe okpomọkụ kachasị ewu ewu na India. Ọ bụ ebumnuche nke ọtụtụ ndị na-azụ azụ azụ na-achọ ihe ọma ...
Njem gaa Cayman Islands
Haswa nwere ọtụtụ agwaetiti mara mma na Oke Osimiri Caribbean na-etinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke paradaịs. Iji maa atụ, Agwaetiti ...
Kamakura, ebe njedebe na Japan
Kamakura bụ otu n'ime njem ndị a na-ahụkarị na Tokyo, isi obodo Japan. Ọ bụrụ na ụwa ...
Oge a dị oke egwu 2020 agafeela.Anyị nwere ike ibido inwe olile anya na anyị ga-ahapụ oria ojoo a na ...
Ihe ị ga-ahụ na Montevideo
N’Ebe Ndịda Amerịka, n’ọnụ mmiri dị na Río de la Plata, e nwere otu obere obodo a na-akpọ Uruguay. Ya…
Lee agwaetiti mara mma n'ụwa! Karịsịa na South Pacific, ala nke ọtụtụ akụkọ banyere ...
Vladivostok bụ obodo Russia dị nso na ókè ala ya na China na North Korea. Ọ bụ…
Njem gaa Ural Ural
A na-ahụta Ural Ural dịka oke ala dị n'etiti Europe na Eshia. Ha bu ugwu mara nma nke na-aga ...
Okirikiri ala nke ọtụtụ ndị njem na-achọ nwere osimiri, anyanwụ na mmiri turquoise. E nwere ọtụtụ ebe ejiri njirimara ndị a, mana ...
Sarajevo bụ isi obodo Bosnia na Herzegovina, obodo nwere ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke dị na ndagwurugwu gbara ...
E kewara ụwa na mpaghara mpaghara ma otu n’ime ha bụ Oceania. Mpaghara a gbatịrị na ugwu abụọ a ...
Nrọ nke ọ bụla nkiri buff bụ ịga Los Angeles ileta n'akụkụ ọ bụla nke City of ...
Enwere obodo ndị nwere ezigbo enyi iji soro ụmụntakịrị leta ha n'ihi na ha na-enye njegharị, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ihe omume, atụmatụ dị mfe ịnyagharịa
America bụ nnukwu kọntinent nke si na njedebe ruo na njedebe nke ụwa. Enwere ọtụtụ mba, mana enweghị obi abụọ ...
Camino Frances de Santiago na-enye gị ohere ileta ọmarịcha obodo ndị dị ka Estella, Nájera, Carrión de los Condes ma ọ bụ Astorga.
Iswa buru ibu na mgbe ị na-eme atụmatụ njem, otu anyị ga-esi chọọ inwe oge na ego iji ...
E nwere ọwa mmiri nke ụmụ mmadụ wuru ụwa ma bụrụ ndị ama ama n'ụwa. Otu n'ime ha bụ ...
Njem njem gaa Etiopia
Ọnọdụ gbara gharịị na-amasị m, pụọ n'okporo ụzọ amịrị. Ma ọ bụ n'ihi na karịa ndị njem nleta m chọrọ inwe mmetụta ...
Otu n'ime osimiri ndị a ma ama n'ụwa niile bụ doro anya na Osimiri Naịl. Agwala m na ọ nweghị ...
Otu n’ime isi obodo na-atọ ụtọ ileta na South America bụ Lima, isi obodo Peru. Ọ bụ obi ...
Mongolia. Naanị aha ahụ na-akpọrọ anyị ozugbo gaa ala ndị dị anya ma dị omimi, na-adọrọ adọrọ. Ọ bụ nnukwu mba, na-enweghị ...
Ihe ị ga-ahụ na South Korea
Ruo oge ụfọdụ, South Korea nọ na egbugbere ọnụ nke nde mmadụ niile ...
Mgbe ọ gafere, onye ọ bụla ga-anọ ebe ahụ na-eche ndị ọbịa. Kedu maka ịme njem dị mkpirikpi na Morocco? Kedu maka njem ...
Ihe ị ga-ahụ na Bologna
Istali bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya na Europe. Akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị, ọdịdị ala ... Onye nwere ike ịwagharị ọtụtụ ụbọchị site na ya ...
The Marshall Islands, na njedebe na Pacific
Ozugbo m gụrụ Marshall Islands, Agha IIwa nke Abụọ, Pacific Ocean, United States na ...
Ọzara na-amasị gị? Enwere ọtụtụ na kọntinent ọ bụla na otu n'ime ihe kachasị mkpa na North America ...
Ihe ị ga-ahụ na Yucatan
Mexico bụ obodo ndị njem nleta na-eme njem, nwere ọtụtụ puku afọ nke akụkọ ntolite na okirikiri ala. Otu n'ime ebe njem nleta ya ...
Ekwuputala ihe omuma ihe banyere ihe omuma kemgbe 1982, Alcalá del Júcar bu otu n’ime obodo ndi mara nma na Spain. Ihe gbasara…
Njem ịga n'Ọdọ Baikal
Osimiri ọdọ mmiri kachasị ukwuu n'ụwa, site na olu, bụ Lake Bailkal. O nwere mmiri karịa ...
Uzbekistan, Ebe Eshia
Iswa buru ibu ma enwere ọtụtụ ebe ị ga-aga ... Ọ bụrụ na anyị ahapụ America, Europe na ndị kacha mara amara nke ...
Ebe kachasị mma ile anya ọdịda anyanwụ
Anwụ dara bụ otu n’ime oge na-adọrọ mmasị n’ụbọchị. Ihe oyiyi nke anyanwu na mbara igwe bu ...
Villanueva nke ụmụ ọhụrụ
Otu n'ime obodo ndị mara mma na mpaghara Ciudad Real yana Almagro bụ Villanueva de los Infantes, ...
Ihe ị ga-ahụ na Hong Kong
Hong Kong bụ ebe dị iche iche, ọgaranya, mmesapụ aka na onye ọbịa, na-atọ ụtọ nke ukwuu ... Ọ bara uru ileta obodo a maka ụbọchị ole na ole ma ọ bụ ...
Agwaetiti Mergui, akụ zoro ezo na Burma
Burmana ma ọ bụ Myanmar bụ obodo dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia nwere ọdịdị ala nke ala ndị mara mma na akụkọ ntolite ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọziri agọzi ...
Ihe ịga leta na Philippines
Philippines bụ nnukwu njem njem. Ọ nwere ọtụtụ ebe mara mma ma ọ bụ ya mere ọ chọrọ njem dị iche iche ...
Ihe ị ga-ahụ na Australia
Otu n'ime mba kachasị mma ịga njem bụ Australia: ọ nwere ụdị ala dị iche iche, ọ dị ugbu a, yana ...
Oman, ebe gbara gharịị
Kedu ihe ị chere maka ịga njem Oman? O nwere ike ọ gaghị adị na ndepụta nke ebe ndị njem nleta kachasị ...
Obodo kacha ibu na Switzerland bụ Zurich, obodo ya na akụ na ụba, ego na mahadum. Nwere ike ịga ebe ụgbọ elu, n'okporo ụzọ ...
Antwerp bụ isi obodo nke otu aha ahụ, nke dị na Flanders. Ọ bụ obodo mara mma, naanị 40 ...
Florence bụ otu n’ime ihe ndị mara mma obodo na Italy. Ọ nwere ebe ngosi ihe mgbe ochie ebe niile, ụka ochie, ebe ndị mara mma, dị mma ...
Ihe ị ga-ahụ na Madagascar
Republic nke Madagascar bụ mba agwaetiti nke dị na Oke Osimiri Indian mara mma ma na-ekpo ọkụ. Ọ bụ agwaetiti ...
Colombo na Sri Lanka
A maara dị ka "agwaetiti nke otu puku aha" n'ihi na n'akụkọ ihe mere eme ọ bụla amawo ya na ọtụtụ ...
Ihe ị ga-ahụ na Malaysia
E kwuru na ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia nwere osimiri na agwaetiti kacha mma n'ụwa. Ọ bụ ebe njedebe ...
Ihe ị ga-ahụ na Saint Petersburg
Nye ọtụtụ ndị, St. Petersburg bụ naanị ihe mere ha ji aga ma ọ bụ gaa Russia. Mere na mara mma nke ukwuu, nke a ...
Halong Bay, Vietnam postkaadị
Halong Bay dị na Vietnam, otu n'ime ebe ndị kachasị ewu ewu na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Backpacker ebe na ...
Hue, ebe njedebe na Vietnam
Otu n'ime ebe kachasị mma na Vietnam bụ Hue, obodo ochie nke bụbu isi obodo ahụ ...
Isi obodo bụ ihe ndọta maka ndị njem, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu mba ahụ, ọ kachasị mma ịpụ ...
Amsterdam bụ isi obodo Holland, ebe na-etinye uche ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ma mee, ka emechara ...
Osimiri kacha mma maka sọọfụ
Ndị hụrụ sọfụ n'anya chọrọ naanị bọọdụ ha, mmiri mmiri na ụfọdụ ebili mmiri ha iji nwee ọ ...ụ na ...
Ihe ị ga-ahụ na Budapest
Budapest bụ otu n'ime obodo ndị ama ama na Europe ịga njem. Maka ndị njem na ...
Mepụta oke ala dị n'etiti United States na Canada, Niagara Falls bụ ihe ngosi ebumpụta ụwa nke nwere mmiri mmiri atọ ...
Towerlọ elu London
Otu n'ime ebe nkiri ndị njem nlegharị anya kachasị na isi obodo UK bụ Tower nke London. Mgbe m laghachiri…
Njem gaa Machu Picchu
Otu n'ime ebe kachasị anwansi n'ụwa, ebe njikọ dị n'etiti anyị na gburugburu ebe obibi dị mfe ...
Ihe ị ga-ahụ na Santorini
Ọ bụrụ n’ịche ihe ị ga-ahụ na Santorini, anyị ga-agwa gị na agwaetiti Greek jupụtara na ihe ịtụnanya okike, saịtị ihe ochie na ihe ncheta.